နေအိမ်အလိုအလျောက် - ကဏ္: ရှိလက်ရှိအခြေအနေနှင့်အိမ်သုံးအလိုအလျောက်စနစ်၏အားသာချက်များ Gadget သတင်း
Nacho Cuesta | | နေအိမ်အလိုအလျောက်
ဤဆောင်းပါးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်a၏အခြေအနေကိုဖော်ပြရန်ကြိုးစားပါမည် ပေါ်ထွက်လာခြင်းနှင့်အိမ်အလိုအလျောက်ကဲ့သို့စိတ်ဝင်စားဖို့အဖြစ်ကဏ္။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့အိမ်သုံးအလိုအလျောက်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
2.1.4 အဆောက်အ ဦ များ၏ပေါင်းစည်းမှု
3.1 ကြိုးမဲ့ vs ကြိုး
3.2 စီးပွားဖြစ်စနစ်များ vs စံ
အတိုချုပ်ဆိုရလျှင်၎င်းကိုကaဟုသတ်မှတ်နိုင်သည် မည်သည့်အဆောက်အ ဦး တပ်ဆင်မှုကိုမဆိုထိန်းချုပ်နိုင်သည့်စနစ် လေအေးပေးစက်၊ မီး၊ အင်ဂျင်၊ လုံခြုံရေး၊ ရုပ်မြင်သံကြားစသည်ဖြင့် (အပြင်နှင့်အပြင်မှ)
ယင်း၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်၏အဓိကအပိုင်းမှာ ပေါင်းစည်းမှုတနည်းအားဖြင့်အင်တာနက်မှထိန်းချုပ်နိုင်သောအပူပေးစနစ်သည်အိမ်သုံးအလိုအလျောက်စနစ်တစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ကျန်တပ်ဆင်မှုများကိုထိန်းချုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်အလွန်အရေးကြီးသောအရာဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာဖောက်သည်သည်ပစ္စည်းမဟုတ်သောပစ္စည်းအတွက်“ အိမ်သုံးအလိုအလျောက်” နှင့်ဆက်စပ်သောအကြိမ်များစွာရှုပ်ထွေးမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။
အ အိမ်အလိုအလျောက်စနစ်ဖြင့်ကမ်းလှမ်းသောအားသာချက်များ ၄ င်းတို့သည်အလွန်ကျယ်ပြန့်ပြီး၊ ပြည်တွင်းနှင့်အဆင့်မြင့်ကဏ္sectorsများအကြားခြားနားချက်ကိုတွေ့ရှိလျှင် ပို၍ ထင်ရှားသည်။ ယုတ္တိနည်းအရ၊ အိမ်၏အလိုအလျောက်အလိုအလျောက်ပါဝင်ခြင်း၏အကြောင်းအရင်းနှင့်အားသာချက်များသည်အဆောက်အအုံအမျိုးအစားနှင့်အသုံးပြုမှုပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။
အိမ်တစ်အိမ်တွင် installation တစ်ခုသည်အများအားဖြင့်သက်တောင့်သက်သာရှိခြင်းနှင့်အဆင်ပြေလွယ်ကူခြင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်နေသည်လုံခြုံရေးနှင့်စွမ်းအင်ချွေတာရေးကဲ့သို့သောကဏ္aspectsများလည်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်သည်။ ဤဥပမာအနေဖြင့်ဤဥပမာသည်အစေခံဖြစ်သည်။
တစ်ခုမှာမြင်ကွင်းတစ်ခုပါဝင်ပါသည် တစ်ခုတည်း command ကိုနှင့်အတူအများအပြားတပ်ဆင်၏ထိန်းချုပ်မှု။ ဥပမာအားဖြင့်၊ လျှောက်လွှာတစ်ခုမှအမှာစာဖြင့် TV ကိုကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးရုပ်သံလိုင်းဖြင့်ဖွင့်နိုင်သည်၊ မီး ၃၀% အားပြင်းထန်စွာဖွင့်နိုင်သည်၊ မျက်မမြင်များကိုလျှော့ချပြီးထိုအခန်း၏အပူချိန်ကို ၂၁ at ဖြစ်သည်။
၏ခံစားချက် အလင်းနှင့်အတူပတ်ဝန်းကျင်သို့မဟုတ်မြင်ကွင်းများဖန်တီးပါ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအနေဖြင့်မှန်ကန်သောလေထုရရှိရန်အခန်းကိုဖြတ်သန်းစရာမလိုသောကြောင့်အခန်းတစ်ခန်းတွင်သက်တောင့်သက်သာရှိသော်လည်းအံ့မခန်းဖွယ်ဖြစ်သည်။
ဒါဟာဖြစ်နိုင် AC နှင့်အပူနှစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်သည် ကွဲပြားခြားနားသောအပူချိန်ကိုတိုင်ပင်ပြီးပိုမိုထိရောက်စွာစီမံခန့်ခွဲရန်တစ်ခုတည်းသောဗဟိုကိရိယာမှဖြစ်သည်။
ဥပမာ - အိမ်မှထွက်ခွာသည့်အခါမျက်မမြင်များကိုအထွေထွေလျှော့ချခြင်းသည်တကယ်အသုံးဝင်ပြီးလက်တွေ့ကျသည်။ ဒါဟာအစအလွန်ဘုံဖြစ်ပါတယ် သတ်မှတ်ထားသောအချိန်တစ်ခုအတွင်းလျှော့ချသို့မဟုတ်ထမြောက်စေမည့်အချိန်ဇယားများထုတ်ဝေခြင်း။ နေသည်ပြတင်းပေါက်သို့တိုက်ရိုက်ထိမှန်သောအခါနာရီအတွင်းစွမ်းအင်ကိုသက်သာစေသည်။
အဆောက်အ ဦ များ၏ပေါင်းစည်းမှု
“ တစ်ခုတည်းရှိအဆောက်အအုံအားလုံး” ရှိခြင်းသည်အသုံးပြုသူအတွက်နှစ်သိမ့်မှုများစွာဖြစ်စေသည်။ သူ၏လက်ဖဝါးတွင်ဆည်မြောင်း၊ ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်း၊ ရေကူးကန်၊ တံခါးများစသည်တို့ကိုထိန်းချုပ်ထားသည်။
၎င်းသည်အဓိကသော့ချက်တစ်ခုဖြစ်သည် တကယ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်သက်သာခြင်း၏ခံစားချက်ပေးထားပါတယ်။ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်များ၊ အထူးယန္တရားများသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းအသုံးချပရိုဂရမ်များမှတဆင့်၊ စျေးကွက်ရှိအကြောင်းအရာပလက်ဖောင်းများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ အော်ဒီယိုရုပ်မြင်သံကြားအားလုံး၏ထိန်းချုပ်မှုအပါအ ၀ င်တပ်ဆင်ခြင်းကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
နောက်ဆုံးတော့ အိမ်လုံခြုံရေးကပိုများတဲ့ကိန်းများကိုကောက်ခံသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဥပမာအားဖြင့်ယိုစိမ့်မှု၊ မီးလောင်မှုကိုရှာဖွေနိုင်ခြင်းစသည့်ရေနှင့် / သို့မဟုတ်ဓာတ်ငွေ့များဖြတ်တောက်ခြင်းကိုသေချာစေရန်ဖြစ်သည်။
ဘယ်လိုနားလည်လဲ တတိယကဏ္ sector ဟိုတယ်များ၊ ရုံးများ၊ ပြတိုက်များ၊ အစိုးရ၊ စက်ရုံများအတွက်အဆောက်အ ဦး များစသည်တို့ဖြစ်သည်။
ဤအဆောက်အ ဦး အမျိုးအစားတွင်အိမ်အလိုအလျောက်ပါ ၀ င်မှုသည်အခြေခံအားဖြင့်ဆက်စပ်နေသည် စွမ်းအင်ငွေစုမှတဆင့်ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချရေး နှင့်အဆောက်အ ဦ ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု။ ဥပမာအချို့မှာ -
သစ္စာဉာဏ်အလင်းမှတဆင့်: အဆောက်အအုံတော်တော်များများမှာ၊ မီးရဲ့ပြင်းထန်မှုရာခိုင်နှုန်းဟာအပြင်ဘက်မှထည့်သွင်းမှုပေါ် မူတည်၍ အလိုအလျောက်ကွဲပြားသောကြောင့်၊ switch များမရှိတော့ပါ။
လေအေးပေးစက်ကတဆင့်ပြတင်းပေါက်ဖွင့်ထားသည်မှာ ၃ မိနစ်ကျော်လျှင်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှမတွေ့ပါကလေအေးပေးစက်အလိုအလျောက်ပိတ်ခြင်းကဲ့သို့သောရှုထောင့်များနှင့်အတူ။
ဗဟိုဆော့ဗ်ဝဲမှတဆင့်: ဤကိစ္စတွင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ၀ န်ထမ်းများသည်အဆောက်အအုံတစ်ခုစီ၏အခြေအနေကိုစစ်ဆေးနိုင်ပြီးအဆောက်အအုံတစ်ဝိုက်ကိုလှည့်ပတ်စရာမလိုဘဲ၎င်းတို့ကို activate လုပ်နိုင်လိမ့်မည်။
ထုတ်လုပ်သူများနှင့်စနစ်များစွာရှိသည် ၎င်းတို့၏ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာကြောင့်အဓိကအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးမျိုးသောပ္ပံများနှင့်အမျိုးအစားများ၏။ ဤအပိုင်းသည်အတန်ငယ်နည်းပညာပိုင်းဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရှိစနစ်များအကြားအဓိကကွဲပြားခြားနားမှုများကိုအတိုချုပ်ဖော်ပြရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။
ကြိုးမဲ့ vs ကြိုး
အဓိကကွာခြားချက်မှာ system element များသည် wired or wireless ဆက်သွယ်နိူင်သည်။ ဒီနေ့ ဝါယာကြိုးစနစ်များကိုအများဆုံးအားကောင်းတဲ့ဖြစ်ကြသည် နှင့်အဆုံးအသုံးပြုသူမှအများဆုံးဖြေရှင်းချက်ပေးသူတွေကို။
ကြိုးမဲ့စနစ်များ (အဓိကအားဖြင့် Zigbee၊ ရေဒီယိုလှိုင်း၊ Wifi နှင့် Zwave) သည်ကြိုးမဲ့စနစ်များထက် ပို၍ အားနည်းသော်လည်း၊ အသေးစားစီမံကိန်းများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်း အကျင့်ကိုကျင့်သယ်ဆောင်ရန်မဖြစ်နိုင်ဘယ်မှာရှိ။
စီးပွားဖြစ်စနစ်များ vs စံ
နောက်ထပ်အရေးကြီးသောခြားနားချက်တစ်ခုမှာစံသို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်နည်းပညာရှိသောစနစ်များအကြားဖြစ်သည်။ standard system တစ်ခုသည် communication protocol ကိုအသုံးပြုသည်, နှင့်အတူတူပင်တပ်ဆင်ထားအတွင်းအချင်းချင်းနားလည်နိုင်စွမ်းထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးသူထုတ်လုပ်သူအများအပြားရှိပါတယ်။ ဤအချက်သည် KNX စံသတ်မှတ်ချက် (ဥရောပတွင်အများဆုံးအသုံးပြုသော)၊ LonWorks (American) သို့မဟုတ် X10 (လျှပ်စစ်ကွန်ယက်၏ carrier currents ကိုစပိန်တွင်အနည်းငယ်သာသုံးသော်လည်း) အသုံးပြုသည်။
အကွောငျး စီးပွားဖြစ်စနစ်များ, ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ချင်းစီက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် protocol ကိုအသုံးပြုသည် ဆက်သွယ်မှု, အရာနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီအချိန်သူတို့စံပြမော်ဒယ်များဆီသို့ပိုပြီး mutating နေကြသည်။
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများမှမကြာသေးမီကဖြေရှင်းချက်များကိုလည်းမီးမောင်းထိုးပြရန်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည် သင်၏ HomeKit သို့မဟုတ် Google Home နှင့်အတူ Apple.
ဤဖြေရှင်းချက်အမျိုးအစားသည်ယခုအချိန်တွင်ဤကုမ္ပဏီအမျိုးအစားအတွက် ပို၍ မဟာဗျူဟာကျသည်၊ အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုမှထိန်းချုပ်နိုင်သည့်ထုတ်ကုန်အချို့နှင့်ဆက်သွယ်ရန် Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုကို အခြေခံ၍ အိမ်တွင်း ဦး စားပေးလုပ်ဆောင်မှုသေးငယ်သည်။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်၎င်းတို့သည်အိမ်သုံးအလိုအလျောက်တပ်ဆင်ခြင်း၏လိုအပ်ချက်များကို၎င်းတို့စက်ရုံများအားလုံးနှင့်ပေါင်းစပ်ပေးနိုင်သည်ဟုမစဉ်းစားနိုင်ပါ။
ယုတ္တိနည်းအရဤမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရင်အချက်သို့ ဦး စွာသွားသင့်သည်၊ ရွေးချယ်ထားသောစနစ်ပေါ် မူတည်၍ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်း။
၏ဖြစ်ရပ်အတွက် ကြိုးမဲ့စနစ်များ၊ သူတို့မှာအခြေခံအဆောက်အအုံလိုအပ်တယ် Chase ထုတ်ခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ခြင်း၏အားနည်းချက်ရှိသော ducting နှင့် custom wiring ။ သို့သော်ထို့ကြောင့်သူတို့သည်လည်းပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရပူဇော်ကြ၏။
ကြိုးမဲ့စနစ်များအတွက်, ဒီအကျင့်ကိုကျင့်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ် အပိုအနှောင့်အယှက်ပေးသော်လည်းအပြည့်အ ၀ လွှမ်းခြုံရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
တစ် ဦး တပ်ဆင်ခ၏ကုန်ကျစရိတ် ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများပေါ်မူတည်။ သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသည် သက်ဆိုင်ရာအဆောက်အအုံ၏ပုံသဏ္giveာန်ဖြစ်သောကြောင့်ခန့်မှန်းတွက်ချက်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။
လေ့လာမှုအချို့အရအိမ်သုံးအလိုအလျောက်စနစ်တပ်ဆင်ခြင်း၏ပျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ်သည်နိဂုံးချုပ်ထားသည် အဆောက်အ ဦး ကိုယ်နှိုက်၏ကုန်ကျစရိတ်၏ 3%.
ပထမတစ်ခုကမြှင့်တင်ရေးပဲ မက်ဒရစ်ရှိအိမ်အလိုအလျောက်နှင့်အတူနေအိမ်များပြီးပြည့်စုံသောပြည့်စုံသောထိန်းချုပ်မှုစနစ်ပါဝင်သည်။ အကောင်အထည်ဖော်သောစနစ်ကတဆင့်ဖြစ်ခဲ့သည် KNX စံနှင့်အိမ်၏တပ်ဆင်မှုအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားသည်အလင်း၊ လေအေးပေးစက်၊ မျက်စိကန်းသူများ၊ မျက်စိကန်းသူများ၊ လုံခြုံရေး၊ ဗွီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားစက်များ။
အခြားဥပမာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းဤကိစ္စတွင်အထက်တန်းကဏ္ on ကိုအာရုံစိုက်ရန်ဖြစ်သည် အသစ် BBVA အဆောက်အ ဦးLa Vela ဟုခေါ်သည်။ အရှေ့ ရုံးခန်းကြီးသည်အလင်းနှင့်အပြင်ဘက်မျက်စိကွယ်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်သည်ကြီးမားသောစွမ်းအင်စုဆောင်းမှုကိုမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ အလင်းရောင်နှင့်မျက်စိကွယ်ခြင်းကိုအလိုအလျောက်တပ်ဆင်နိုင်ရန်ဤတပ်ဆင်ခြင်းသည်ရာသီဥတုအခြေအနေများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။
ဤ ၎င်းတို့သည်အိမ်တွင်းအလိုအလျောက်ကဲ့သို့ကျယ်ပြန့်သောကဏ္ of ၏အဓိကပုဆိန်များဖြစ်သည်အများအပြားဖြေရှင်းချက်များနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အတူ။ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းတိုးတက်မှုနှင့်တိုးတက်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရဖွယ်ရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ကိုရေတွက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ဂရုပြုကြလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » နေအိမ် » နေအိမ်အလိုအလျောက် » လက်ရှိအခြေအနေနှင့်အိမ်သုံးအလိုအလျောက်၏အားသာချက်များ
Sony သည် PlayStation Store တွင် Black Friday ကိုမှတ်မိရန်ဤထူးဆန်းသည့်ကြော်ငြာကိုစတင်ခဲ့သည်